Dagaal ka dhan ah Shabaab oo looga dhawaaqay deegaanada Jubbaland – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Taliska qaybta 43 aad ee Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxaa ay sheegeen inay wadaan qorsho dagaal oo ka dhan ah Al-Shabaab,kaas oo loooga saarayo deegaanada ay kaga sugan yihiin Gobolada Jubbooyinka.
Taliyaha Ciidanka Guutada 1aad taliska qeybta 43aad Gaashaanle Sare Maxamed Badal Xasan ayaa sheegay in ay hadda qorsheynayaan weeraro ka dhan ah Al-Shabaab inta lagu guda jiro Bisha Ramadaan si ay uga saaraan deegaano badan oo ay maamulaan.
Waxa uu sheegay in qorshohooda uu yahay inay howlgalka bilaabaan inta uusan deegaanada Jubbooyinka ka da’in Roobka guga oo wadooyinka qaar jara,waxaana Shacabka uu ka codsaday in Ciidamada Dowladda kala Shaqeeyaan sugida Amniga.
Ciidamada Dowladda iyo kuwa ka tirsan Maamulka Jubbaland ayaa ku sugan deegaano badan oo ka tirsan gobolada Jubbooyinka iyo gedo,waxaana mararka qaar ay weeraro kala kulmaan Ururka Al-Shabaab.
← Roobab lagu diirsaday oo ka ‘aday Muqdisho → FAO seed kits cushion harvest losses in Mozambique